Shirka Midowga Yurub oo go`aanno laga soo saaray - BBC News Somali
24 Juunyo 2017
Hoggaamiyeyaasha Faransiiska iyo Jarmalka ayaa go`aanno ay isku raaceen ka jeediyay dhammaadka shir labo maalmood waddamada Midowga Yurub uga socday magaalada Brussels ee dalka Biljamka, iyagoo muhiimadda siiyay mustaqbalka Midowga Yrub kaddib marka ay Britain isaga baxdo.
Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa ka hadashay hadal dhiiranaan leh iyadoo oo uu garab taagan yahay madaxweyne Macron oo sheegay in horumar laga gaaray qorsha ay Britain in badan hortaagnayd- kaas oo ah maalgelinta difaaca Yurub.
Waxay sidoo kale ku baaqeen in xubnaha Midowga Yurub ay si weyn isaga kaashadaan wax ka qabashada xasaradaha soo galootiga.
Dhowr hoggaamiye oo ka tirsan Midowga Yurub ayaa sheegay in ballan qaadka raysal wasaaraha Britain Theresa May ee ku aaddan in xuquuq wax ku ool ah la siin doono dhammaan dadka u dhashay waddamada Yurub ee Britain ku noolaa muddo shan sano ah aysan gaarsiisnayn rajadii ay qabeen.
Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Britain ayaa sheegaya in guddiyada caalamiga ah ee ay ku lug leeyihiin qareennada Midowga Yurub iyo Britain ay xukmin karaan muranka dhalashada kaddib marka ay Britain isaga baxdo, balse aysan ahayn Maxkamadda Caddaaladda ee Yurub, sida Midowga Yurub uu ku adkeysanayo.